Wednesday August, 12 2020 - 12:41:33
Thursday July 16, 2020 - 11:28:05 in by salman abdi
"Cid walba waxay i weydiineysaa inaan u soo celiyo," farriin barta Twitter-ka Bill gates la soo dhigay ayaa waxay leedahay. "$1000 doolar ii soo dir anna waxaan ku soo dirayaa $2,000 oo doolar."
"Waa wakhti nagu adag ka Twitter ahaan, waxay noo ahayd maalin adag u ahayd oo ay ku wareereen sida ay wax u socdaan, waxaanna dareemeynay welwel aad u weyn" ayuu yiri Maareeyaha Guud ee Twitter-ka Jack Dorsey.
""Hadda waxaynu wadnaa baaritaan aan ku ogaaneyno waxa dhacay iyo sida ay wax udhaceen waana la wadaagi doonnaa macamiishayada balse weli waxaan u baahannahay inaan si buuxda u ogaanno waxa dhacay" ayuu Mr Dorsey.
Mar sii horreysay, Twitter ayaa qaaday tallaabbooyin aan caadi ahayn oo uu ku joojinayo akoonnada badan oo sax ah oo ay calaamadda buluugga saaran tahay."
Twitter-kana waxay sheegtay iney weli ka shaqeyneyso waxa dhacay sidi ay wax uga qaba lahayd.
Waxaa sida oo kale la xiray barta Twitter-ka ololaha doorashada ee Biden "waxaa la xiray cinwaankaasi daqiiqado gudahood waxaana meesha laga saaray baraha Twitter-ka ee la xiriiray".
Afhayeen u hadlay Bill Gates wuxuu wakaaladda wararka AP uu u sheegay "Arrintani waxay ka mid tahay arrimaha waaweyn ee ay Twitter wajaheyso."
'Hargaysa Dulmi Xunbaa Ka Socda Oo Muuse Biixi Kaw Kayahay" Suldaan Daacad
10/08/2020 - 13:16:47
Dibada:Iran Oo Weerartay Wax Loo Ekeysiiyay Markab Dagaal Oo Uu Leeyahay Mareykank
30/07/2020 - 10:28:59
28/07/2020 - 17:25:01
Galmudug oo beenisay in la isku mari la'yahay shirka Dhuusomareeb
22/07/2020 - 09:25:31